Amụma nzuzo na kuki ("Iwu Nzuzo")
Amụma nzuzo a bụ ngosipụta nke nlekọta nke ndị ọbịa na weebụsaịtị yana iji ọrụ enyere site na ya. Ọ bụkwa mmezu nke ọrụ ozi n'okpuru Art. 13 nke Regulation (EU) 2016/679 nke ndị omeiwu European na nke Council nke 27 Epril 2016 na nchebe nke ndị mmadụ na-eleba anya na nhazi nke data onwe yana na nnwere onwe nke data dị otú ahụ, yana iweghachi Iwu 95/46 / EC (iwu izugbe na nchedo nke data nke onwe) (Journal of Iwu UE L119 nke Mee 4.05.2016, 1, p. XNUMX) (nke akpọrọ aha GDPR).
Onye nwe ebe nrụọrụ weebụ ahụ na-akwụ ụgwọ pụrụ iche iji kwanyere nzuzo nke ndị ọrụ weebụsaịtị. A na - echedo data nke enwetara dịka akụkụ nke weebụsaịtị ahụ wee chebe ya site na ịnweta ndị na - enwetaghị ikike. Emere iwu nzuzo a maka ndị niile nwere mmasị. Weebụsaịtị ahụ mepere.
Onye nwe ebe nrụọrụ weebụ ahụ na-ejide n'aka na ebumnuche ya dị oke mkpa bụ inye ndị mmadụ iji websaịtị ahụ na nchedo nzuzo na ọkwa dịkarịa ala kwekọrọ n'ihe iwu dị mkpa, ọkachasị ihe ndị GDPR na Iwu nke July 18, 2002 na ndenye nke ọrụ elektrọnik.
Onye nwe ebe nrụọrụ weebụ ahụ nwere ike ịnakọta data onwe ya na data ndị ọzọ. Nchịkọta data ndị a na-ewere ọnọdụ, dabere na ọdịdị ha - akpaghị aka ma ọ bụ n'ihi omume nke ndị ọbịa na weebụsaịtị.
Onye ọ bụla na-eji saịtị weebụ n'ụzọ ọ bụla na-anabata iwu niile dị na Iwu Nzuzo a. Onye nwe ebe nrụọrụ weebụ ahụ nwere ikike ịme mgbanwe na akwụkwọ a.
Ozi izugbe, kuki
Onye nwe ya na onye na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ bụ Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na ụlọ ọrụ edebanyere aha ya na Warsaw, adreesị: ul. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, banyere n'ime aha ndị ọchụnta ego nke Courtlọikpe National Court debere na Courtlọikpe District na Warsaw, Ngalaba Azụmaahịa nke Courtlọikpe Mba, n'okpuru nọmba KRS: 0000604168, nọmba NIP: 5213723972, nọmba REGON: 363798130. Dabere na Iwu GDPR, onye nwe ebe nrụọrụ weebụ bụkwa Onye Nchịkwa data nkeonwe nke ndị ọrụ webụsaịtị ("Onye Nchịkwa").
Dị ka akụkụ nke ọrụ ndị a rụrụ, Onye Nchịkwa na-eji kuki n'ụzọ ndị ọ na-ahụ ma na-enyocha okporo ụzọ dị na ibe weebụ, yana na-eme ọrụ ịmaliteghachi, n'agbanyeghị, dị ka akụkụ nke ọrụ ndị a, Onye Nchịkwa anaghị ahazi data nkeonwe n'ime ihe GDPR pụtara.
Weebụsaịtị na-achịkọta ozi gbasara ndị ọrụ webụsaịtị na omume ha otu a:
Weebụsaịtị na-anakọta ozi niile dị na kuki.
sitere na data wee banye na afọ ofufo site n'aka ndị ọrụ webụsaịtị, n'ụdị dị na ibe weebụ.
site na mkpokọta nkesa sava weebụ na-akpaghị aka.
Faịlị kuki (nke a na-akpọ "kuki") bụ data IT, akpan akpan faịlụ ederede, nke echekwara na ngwa ngwụsị nke onye ọrụ wee bu n'obi iji ibe weebụ. Kuki na-enwekarị aha weebụsaịtị ha sitere, oge nchekwa na ngwaọrụ njedebe yana ọnụọgụ pụrụ iche.
N'oge nleta nke weebụsaịtị ahụ, enwere ike ịnakọta data nke ndị na-ahụ maka weebụsaịtị wee na-akpaghị aka, na-emetụta nleta onye ọrụ nyere na weebụsaịtị, gụnyere, n'etiti ndị ọzọ. Adreesị IP, ụdị ihe nchọgharị weebụ, aha ngalaba, ọnụ ọgụgụ nke ihu peeji, ụdị sistemụ arụmọrụ, nleta, mkpebi ihuenyo, ọnụ ọgụgụ agba agba, adreesị nke weebụsaịtị nke websaịtị wee nweta, oge iji weebụsaịtị. Ihe omuma ndi a abughi data nke onwe, ma obu ha ekweghi ka njirimara nke onye jiri weebụsaịtị.
Enwere ike ịnwe njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ n'ime weebụsaịtị. Onye nwe ebe nrụọrụ weebụ ahụ adịghị maka ọrụ nzuzo nke weebụsaịtị ndị a. N'otu oge ahụ, onye nwe ebe nrụọrụ weebụ ahụ na-agba onye ọrụ weebụsaịtị ume ka ọ gụọ amụma nzuzo guzobere na weebụsaịtị ndị a. Amụma nzuzo a anaghị emetụta weebụsaịtị ndị ọzọ.
Thatlọ ọrụ nke na-etinye kuki na ngwaọrụ ngwụsị onye ọrụ weebụ wee nweta ya bụ onye nwe ebe nrụọrụ weebụ ahụ.
A na-eji kuki iji:
na-agbanwe ọdịnaya nke ibe weebụ ahụ na mmasị onye nrụọrụ weebụ yana njikarịcha ojiji nke weebụsaịtị. ọkachasị, faịlụ ndị a na-enye ohere ịghọta ngwaọrụ onye ọrụ weebụsaịtị wee gosipụta weebụsaịtị ahụ nke ọma, kwekọrọ na mkpa onye ọ bụla,
na-eke ọnụ ọgụgụ na-enyere aka ịghọta otu ndị ọrụ webụsaịtị si eji weebụsaịtị, nke na-enye ohere imeziwanye ihe ha na ọdịnaya,
na-ejigide nnọkọ onye ọrụ weebụ (mgbe ịbanyechara), ekele nke ọ na-enweghị ịbanye na ntinye ya na paswọọdụ ọ bụla na ibe niile nke weebụsaịtị ahụ.
Weebụsaịtị na-eji ụdị kuki ndị a:
Kuki "dị mkpa", na-eme ka ojiji nke ọrụ dị na webụsaịtị, dịka kuki nkwenye,
kuki eji eme ihe iji hụ na nchekwa, dịka iji
Kuki "Arụrụ", nke a na-eji nweta ozi maka iji ibe weebụ site n'aka ndị ọrụ webụsaịtị,
Kuki "mgbasa ozi", na-enyere ndị ọrụ websaịtị ahụ aka iwepụta ọdịnaya mgbasa ozi dabara na ọdịmma ha,
Kuki "Arụmọrụ", na - enyere "icheta" ntọala nke onye ntanetị wepụtara wee mee ka onye webusaiti webụsaịtị ahụ, dịka okwu nke asụsụ ahọpụtara.
Webụsaịtị ahụ na-eji ụdị kuki abụọ dị mkpa: kuki nnọkọ na kuki na-adịgide. Kuki oge enwere bụ faịlụ nwa oge echekwara na ngwaọrụ njedebe ruo mgbe ha hapụrụ webụsaịtị ahụ, wepu ya na onye ọrụ weebụ ma ọ bụ gbanyụọ ngwanrọ ahụ (ihe nchọgharị weebụ). A na-echekwa kuki na-adịgide adịgide na ngwaọrụ ngwụsị nke weebụsaịtị maka oge akọwapụtara na ụdị kuki faịlụ ma ọ bụ ruo mgbe onye ọrụ weebụ wepụrụ ha.
N'ọtụtụ oge, ngwanrọ eji eme ihe maka weebụsaịtị na-enye ohere ịchekwa kuki na ngwaọrụ ngwụsị onye ọrụ weebụ. Ndị na-eme ihe ntanetị nwere nhọrọ ịgbanwe ntọala kuki n'oge ọ bụla. Enwere ike ịgbanwe ntọala ndị a na nhọrọ nke ihe nchọgharị weebụ (sọftụwia), interXNUMXia, n'ụzọ na-egbochi njikwa nke akpaka ma ọ bụ na-amanye onye ọrụ webụsaịtị ahụ oge ọ bụla etinyere kuki na ngwaọrụ ha. Ihe omuma zuru ezu banyere ohere na uzo isi ejikwa kuki di na ntọala ihe nchọgharị weebụ.
Mmachibido iji kuki nwere ike imetụta ụfọdụ arụmọrụ dị na ibe weebụ.
Enwere ike iji kuki etinye na ngwa ngwụsị nke onye ọrụ weebụ ahụ site na ndị mgbasa ozi na ndị na-emekọ ihe na onye nwe saịtị ahụ.
Nhazi nke data nkeonwe, ozi gbasara ụdị
Onye Nchịkwa nwere ike ịhazi data onwe onye nke ndị websaịtị:
ọ bụrụ na onye ọrụ webụsaịtị ekwenye na ya n'ụdị edere na webụsaịtị, iji wee mee omume nke ụdị ndị a metụtara (Nkeji edemede 6 (1) (a) nke GDPR)
mgbe nhazi dị mkpa iji mezuo nkwekọrịta nke onye ọrụ webụsaịtị bụ nnọkọ (Nkeji edemede 6 (l) (b) nke GDPR), ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-enye nkwenye nke nkwekọrịta dị n'etiti Onye nchịkwa na onye ọrụ weebụsaịtị.
Dịka akụkụ nke weebụsaịtị, ndị ọrụ ntanetị wepụtara data onwe onye na-ahazi data nkeonwe. Onye nchịkwa ahụ na-eme data nkeonwe nke ndị na-ahụ maka weebụsaịtị wee ruo etu ekwesịrị maka ebumnuche edepụtara na 1 lit. b na b oge d ị mkpa iji mezuo ebumnuche ndị a, ma ọ bụ rue mgbe onye ọrụ webụsaịtị wepụrụ nkwenye ha. Emebi inye data nke onye websaịtị ahụ nwere ike, n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga - ebute enweghị ike imezu ebumnuche nke achọrọ data dị mkpa.
Enwere ike ịnakọta data nkeonwe onye ọrụ weebụsaịtị ahụ dị ka akụkụ nke mpempe akwụkwọ edepụtara na weebụsaịtị ma ọ bụ iji mee nkwekọrịta nwere ike ikwubi dị ka akụkụ nke weebụsaịtị: aha, aha nna, adreesị, adreesị ozi-e, akara ekwentị, nbanye, paswọọdụ.
Onye data wepụtara onye isi ihe ntanetị ahụ wee nyefee Onye isi nchịkwa ya na ndị ọzọ na-akwado Onye Isi Njikọ ahụ na mmejuputa ebumnuche ndị edepụtara na isi 1. a na b n’elu.
A na-ahazi data enyere n’ụdị dị na weebụsaịtị maka ebumnuche sitere na ọrụ otu ụdị, na mgbakwunye, Onye Nchịkwa ga-ejikwa ya maka ebumnuche ndekọ na ndekọ ọnụ ọgụgụ. Ekwuputara nkwenye nke isiokwu data site na ịlele windo kwesịrị ekwesị n'ụdị.
Onye ọrụ webụsaịtị ahụ, ọ bụrụ na websaịtị ahụ nwere arụ ọrụ dị otu a, site na ịhọrọ windo kwesịrị ekwesị n'ụdị ndebanye aha ahụ, nwere ike jụ ma ọ bụ kwenye ịnata ozi azụmahịa site na ụzọ nkwukọrịta electronic, dị na Iwu nke 18 July 2002 na ntinye ọrụ nke elektrọnik ( Journal of Iwu nke 2002, Nọmba 144, ihe 1024, ka emeziri emezi). Ọ bụrụ na onye ọrụ webụsaịtị ekwenyela ịnweta ozi azụmahịa site na nkwukọrịta elektrọnik, o nwere ikike ịwepu ụdị nkwenye ahụ n'oge ọ bụla. Emere ikike ịdọrọ nkwenye iji nweta ozi azụmaahịa a na-eme site n'izite arịrịọ kwesịrị ekwesị site na ozi-e na adreesị nke onye nwe weebụsaịtị ahụ, gụnyere aha na aha nna nke onye ọrụ weebụ ahụ.
Enwere ike ịnyefe data enyere n'ụdị ndị a na ntinye aka na teknụzụ nke enye ọrụ ụfọdụ - ọkachasị, nke a metụtara ịnyefe ozi gbasara onye nwe ngalaba aha edebanye aha na ndị na-arụ ọrụ na ngalaba ntanetị (ọkachasị Sayensị na Ọmụmụ Kọmputa kompeni jbr - NASK), ọrụ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, nke onye njikwa jikwaa aka na nkwanye ugwu a.
A na-echekwa data nke ndị ọrụ webụsaịtị na nchekwa data ebe etinyere ụkpụrụ ọrụ na nhazi iji hụ na echedoro data nke esesara dị na ihe edepụtara n'iwu ndị dị mkpa.
Iji gbochie idebanye aha ndị mmadụ ahapụrụ websait webụbụ na-agabigaghị iji ọrụ webụsaịtị ahụ, Onye isi nchịkwa ahụ nwere ike jụ ihichapụ data onwe onye dị mkpa iji gbochie ohere ịbanye ọzọ. Ntọala iwu kwadoro maka ọjụjụ bụ Art. 19 paragraf 2 isi 3 na Art. 21 ikp. 1 nke Iwu nke July 18, 2002 na ndenye ọrụ elektrọnik (ya bụ nke Ọktọba 15, 2013, Journal of Iwu nke 2013, ihe 1422). Ọjụjụ onye isi nchịkwa nhichapụ data nke ndị ọrụ webụsaịtị nwekwara ike ịdapụta na ọnọdụ ndị ọzọ enyere n'iwu.
N'okwu enyere n'iwu, Onye Nchịkwa nwere ike igosipụta ụfọdụ data nke ndị ọrụ saịtị maka ndị ọzọ maka ebumnuche metụtara nchedo ikike ndị ọzọ.
Onye nchịkwa ahụ nwere ikike izipu ndị ọrụ niile webụsaịtị ozi email na ozi banyere mgbanwe dị mkpa na weebụsaịtị yana mgbanwe maka Iwu Nzuzo a. Onye nchịkwa ahụ nwere ike izipu akwụkwọ ozi eletrọnik azụmahịa, karịsịa mgbasa ozi na ozi azụmahịa ndị ọzọ, ma ọ bụrụhaala na onye ọrụ weebụ ahụ ekwenyela na ya. Enwere ike itinye mgbasa ozi na ozi azụmahịa ndị ọzọ na leta na-abata ma na oku na akaụntụ sistemụ.
Ikike ndị ọrụ na-arụ ọrụ banyere data nkeonwe ha dị ka Art. 15 - 22 GDPR, onye ọrụ weebụ ọ bụla nwere ikike ndị a:
Ikike ịnweta data (Nkeji edemede 15 nke GDPR)Isiokwu data nwere ikike inweta site na nkwenye nke Onye nchịkwa dịka ma data nkeonwe gbasara ya na-arụ ọrụ, ma ọ bụrụ otu a, ịnweta ha. Dabere na Art. Onye nchịkwa ahụ ga-enye isiokwu data ahụ otu akwụkwọ nke data onwe ya na-arụ ọrụ.
Ikike idozi data (Nkeji edemede 16 nke GDPR)Isiokwu data nwere ikike ịrịọ Onye nchịkwa ka ọ mezie data onwe ya ozugbo gbasara ya.
Ikike ihichapụ data ("echefuru echefu") (Nkeji edemede 17 nke GDPR)Isi okwu data nwere ikike ịrịọ Onye isi nchịkwa ka ọ kpochapụ data nkeonwe ya ozugbo, Onye isi nchịkwa ahụ kwesịrị ka ihichapụ data onwe ya na-enweghị oge na-enweghị isi ma ọ bụrụ na otu n'ime ọnọdụ ndị a
data nkeonwe adịkwaghị mkpa maka ebumnuche nke anakọtara ha ma ọ bụ ahazie ya;
isiokwu data ewepụrụla nkwenye nke nhazi a dabere
data metụtara ihe nhazi na Art. 21 ikp. 1 megide nhazi ma ọ nweghị ihe ndabere dị mma maka nhazi
Ikike igbochi nhazi (Nkeji edemede 18 nke GDPR)Isiokwu data nwere ikike ịrịọ onye nchịkwa ka amachie nhazi n'ime ihe ndị a:
Mgbe data ezighi ezi - na oge iji dozie ya
Isiokwu data ahụ emegideghị nhazi ya dika Art. 21 nkeji. 1 megide nhazi - ruo mgbe a ga - ekpebi ma ihe mgbakwasị ụkwụ ziri ezi nke onye nchịkwa ga - egbochi ihe mgbakwasị maka ịjụ isiokwu data.
Nhazi ahụ bụ ihe iwu akwadoghị yana isiokwu data na-emegide nhichapụ nke data onwe onye ma rịọ ka amachibido ojiji ha kama.
5. Ikike ị nwere ike ị nweta data (art. 20 GDPR)Isi okwu data nwere ikike ịnata, n'ụdị, nke a na-ejikarị, igwe a na-agụgharị, data nkeonwe gbasara ya, nke o nyere Onye isi nchịkwa, ma nwee ikike izipu data nkeonwe ya na onye nchịkwa ọzọ na-enweghị ihe mgbochi ọ bụla na Onye isi nchịkwa nke enyere ya onwe ya data. Isi okwu data nwere ikike ịrịọ ka onye nchịkwa zipụ data nkeonwe ya na onye nchịkwa ọzọ, ọ bụrụ na enwere ike teknụzụ. Iwu e zoro aka na nkebi a enweghị ike imetụta ikike na ohere ndị ọzọ.
6. Ikike ime ihe (Art. 21 GDPR)Ọ bụrụ na edozi data nkeonwe maka ebumnuche azụmaahịa, isiokwu data nwere ikike ịjụ n'oge ọ bụla na nhazi nke data nkeonwe ya maka ebumnuche ahịa dị otú ahụ, gụnyere ịkọwapụta, ruo n'ókè na nhazi ahụ metụtara ahịa dị otú ahụ. .
Mmejuputa ikike ikike dị n’elu nke ndị ọrụ webụsaịtị nwere ike ime ihe megide ịkwụ ụgwọ n'ọnọdụ ebe iwu dị adị nyere ya
N'ọnọdụ nke imebi ikike ndị dị n'elu ma ọ bụ onye ọrụ webụsaịtị ahụ na-achọpụta na Onye Nchịkwa na-ahazi data nke aka ya megidere iwu ọdabara, onye na-arụ ọrụ weebụsaịtị nwere ikike itinye akwụkwọ mkpesa na ndị isi nlekọta.
Dabere na omume anakwere nke ọtụtụ weebụsaịtị, onye na-ahụ maka nrụọrụ weebụ na-echekwa ajụjụ ọchụchọ nke ndị ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ (ozi gbasara ụfọdụ omume nke ndị ọrụ ntanetị na-abanye na sava sava). Achọpụtara akụ ndị achọgharịrị site na adreesị URL. Ndepụta ozi gbasara echekwara na faịlụ ndekọ sava dị ka ndị a:
Adreesị IP ọha nke kọmputa sitere na ya,
aha ụlọ ọrụ ndị ahịa - njirimara sitere na sistemụ http, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume,
enyere aha websaịtị enyere na ikike (nbanye),
Koodu nzaghachi http,
ọnụọgụ abụọ nke bytes zitere site na sava,
Adreesị URL nke ibe onye ọrụ websaịtị gara aga (njikọ maka) - ọ bụrụ na enwetara weebụsaịtị wee site na njikọ,
ozi banyere ihe nchọgharị weebụ onye ọrụ,
ozi banyere njehie nke mere n’oge ana - egbu azụmahịa azụmahịa http.
Ejikọghị data ndị a dị elu na ndị ụfọdụ akọwapụtara peeji ndị dị na weebụsaịtị. Iji hụ na ogo dị elu nke mkpokọta weebụ, ndị na-arụ ọrụ webụsaịtị na-enyocha faịlụ ndekọ oge ụfọdụ iji chọpụta ibe n'ime websaịtị a na-elekarị, nke a na-eji ihe nchọgharị weebụ, ma ihe owuwu weebụ ahụ enweghị nsogbu, wdg.
A na-echekwa ndekọ ndị ọrụ na-ahụ maka ọrụ maka oge ebighi ebi dị ka ihe inyeaka ejiri rụọ ọrụ maka weebụsaịtị kwesịrị ekwesị. A gaghị ekpughere ndị ọzọ ozi na-abụghị onye na-arụ ọrụ ma ọ bụ mpaghara metụtara onye ọrụ ahụ n'onwe ya, site na isi obodo ma ọ bụ nkwekọrịta. Dabere na ozi dị na faịlụ ndị a, enwere ike imepụta ọnụ ọgụgụ iji nyere aka na ịhazi weebụsaịtị. Nchịkọta ndị nwere ụdị ọnụ ọgụgụ a enweghị njirimara na-achọpụta ndị ọbịa webụsaịtị.